Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Ku Soo Dhowoow IMEX America Hadda Oo Maalin Kaliya Ka Jirto
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Kooxda goobta IMEX.
Soo dhawoow dib! Kooxda IMEX ee goobta joogta waxay soo dhawayn diirran u fidiyaan dhacdooyinka ganacsiga caalamiga ah ee bulshada lagu dejiyay inay isugu yimaadaan IMEX America, taasoo dhacaysa usbuucan.
Hal maalin gudaheed, IMEX America waxay ka furmaysaa Las Vegas ee Mandalay Bay.
Kani waa 10th daabacaadda dhacdada IMEX America oo socon doonta November 9-11.
Dhacdadan muhiimka ah waxaa lagu dalacayaa "soo-noolaanshaha warshadaha," waana dhacdadii ugu horreysay ee caalami ah oo ka dhacda Ameerika ka dib markii Mareykanka uu qaaday xayiraadii socdaalka caalamiga ah.
Bandhiga waxaa la qabtaa Noofambar 9 - 11 ee Las Vegas, ka hor, Smart Monday, ay ku shaqeyso MPI, oo dhacaya maanta. Qayb weyn oo ka mid ah dhacdooyinka ganacsiga caalamiga ah ee bulshada ayaa isu iman doona si ay isaga kaashadaan, u ganacsadaan oo ay wax u bartaan inta lagu guda jiro xilligan muhiimka ah ee qaybta.
IMEX Ameerika waxaa loo dalacsiiyay sida "hoy u noqoshada warshadaha" oo waxaa jira sabab badan oo loogu dabaaldegayo maalmaha soo socda - kaliya maahan IMEX America waxay leedahay guri cusub, Mandalay Bay, sidoo kale waa daabacaaddii 10-aad ee bandhigga.
Fikradda IMEX waxaa la bilaabay Sebtembar 2001 iyada oo bandhiggeedii ugu horreysay Abriil 2003 ka dhacday Frankfurt oo ku taal hoolka Messe Frankfurt ee ugu weyn 2005 ka dibna IMEX America ayaa laga furay Las Vegas Oktoobar 2011.
Barnaamijka iibsadaha ee gaarka ah ee la martigeliyay, nidaamka ballanka onlaynka ah, hab-dhaqanka ganacsiga-ugu horreeya, iyo habka shuraakada ayaa kala saaraya IMEX. Aragtida dhacdadu waa tii aduunka ganacsiga wanaagsani ka gudbayo xuduudaha iyo meesha qorshayaasha shirarka caalamiga ah iyo alaab-qeybiyeyaasha ay si fudud isugu xiri karaan.
Hadafka IMEX wuxuu had iyo jeer ahaa inuu ka badan yahay qabanqaabiyaha bandhigga. IMEX waxay isu dhigtay xudunta warshadaha shirarka, waxayna naqshadaysay bandhigyadeeda si ay uga caawiso ka qaybgalayaasha inay bartaan, isku xidhaan, oo ay ganacsi sameeyaan. Hindisaha la socday IMEX tan iyo markii la bilaabay waxaa ka mid ah barnaamijka abaal-marinaha, Diirada Ururka, Hogaamiyaasha Mustaqbalka iyo Siyaasadda (Siyaasiyiin hore) Forums - hadda waxaa ku biiray dhacdooyin ay ka mid yihiin Shirkadaha Gaarka ah, Waxay Macnaheedu tahay Ganacsi, iyo Smart Monday.
Barnaamijka waxbarashada ee IMEX waxa uu ka koray 30 siminaaro bandhigii ugu horeeyay ilaa 200 oo lagu daray bandhig kasta maanta. Kooxda IMEX waxay ka barbar shaqeysay la-hawlgalayaasha si ay u horumariyaan dhacdooyinka - iyo markeeda la-hawlgalayaashani waxay keeneen dhacdooyinkooda bandhigyada IMEX, laga bilaabo SITE Nite iyo MPI Rendezvous ilaa shirarka xubnaha ICCA ee sannadlaha ah. IMEX waxay sii wadaa inay nadiifiso line-upkeeda dhacdada marka ay warshaduhu isbedelaan oo ay koraan.
In kasta oo laga yaabo in warshaduhu isbedelaan tobankii sano ee la soo dhaafay ama wax ka badan, waxa aan isbeddelin waa rabitaanka dadku inay isu yimaadaan. Xidhiidhada shakhsi ahaaneed ee xooggan ee ka dhex jira warshadaha ayaa udub dhexaad u ah guusha bandhigyada IMEX. Inkasta oo kooxda IMEX ay ka badan tahay afar laab tirada shaqaalaha, inta badan hormoodyadii asalka ahaa weli waa qayb ka mid ah kooxda iyo qoyska.